ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး | Page6| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
>> Hand-foot-and-mouth disease ဆိုတာ ဘာလဲ?
ပါးစပ်အတွင်း ဒါမှမဟုတ် ပါးစပ်အပြင်မှာ အရေကြည်ဖုပေါက်ခြင...
22.7.2019 | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
• အန္တရာယ်ကင်းစေဖို့အတွက် ကလေးနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ထိ...
ကလေးတွေဆိုတာက တဖြည်းဖြည်းချင်းဖွံ့ဖြိုးလာကြတာပါ။ အစာစားတဲ့အခါမှာလည်းအတူတူပါပဲ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ အစာမာကိုစားတတ်ဖို့သင်ယူတယ်။ ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ အစာကို က...
ချစ်ခြင်းတွေပြည့်ဝနေတဲ့ မိသားစုဘ၀ကို တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ဒါတွေလိုအပ်ပါတယ်
21.7.2019 | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
1. နည်းနည်းပြော များများနားထောင်ပါ။
♦ တစ်နေ့တာ ကျောင်းမှာ၊ ကျူရှင်မှာ ဘာတွေ လုပ်ရသလဲဆိုတာကို ပေါ့ပေါ့ပ...
လမ်းလျှောက်တတ်စကလေးငယ်များတွင် အဖြစ်များသော ဦးခေါင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးပြသနာများ
(၁) ဦးခေါင်းတွင် အာလူးဖုများဖြစ်ပေါ်ခြင်း
မတ်တပ်ပြေးစအရွယ်ကလေးများတွင် အဖြစ်များသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကလေးများအနေဖြင့် ပြေးလွားဆော့ကစားရာမှ မ...
ကလေးငယ်တွေကို ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ သံဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်း
20.7.2019 | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
သင့်ကလေးခန္ဓာကိုယ်မှာ တစ်နေ့တာလိုအပ်တဲ့ သံဓာတ်အပြည့်အဝ ရရှိပါရဲ့လား။ သံဓာတ်ချို့တဲ့ရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်သလဲ၊ ချို့တဲ့ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်း...
နို့တိုက်ပုံ မှန်ကန်ကျွမ်းကျင်စေဖို့ ...
19.7.2019 | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
နို့တိုက်နေတဲ့ သားသည်မိခင်ဟာ သဘာဝက ဖန်တီးပေးထားတဲ့ လှပတဲ့မြင်ကွင်းတွေထဲက တစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ မိခင်နဲ့ ကလေးကြားမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို...
မိဘနဲ့ကလေးကြားမှာ ရင်းနှီးနွေးထွေးမှုရရှိစေဖို့ကလွယ်ပါတယ်။ မေမေ ဖေဖေတို့အနေနဲ့ သဘာဝအတိုင်းလေးပဲ ကလေးကိုအချိန်ပေးပြီး ကလေးနဲ့အတူအချိန်ကုန်ဆုံးတာလေးက...